Uthi ugaqelwe ngawePSL olaxazwe yiChiefs | News24
Uthi ugaqelwe ngawePSL olaxazwe yiChiefs
Johannesburg – Umdlali wasesiswini osanda kulaxazwa yiKaizer Chiefs uSiyabonga Nkosi usekuqinisekisile ukuthi kunamaqembu agijima kwi-PSL asekhombise intshisekelo ngaye.
Ngokubika kweSoccerLaduma inkontileka kaNkosi neChiefs iyaphela kule nyanga kanti leli qembu selikabeka kwacaca ukuthi ngeke iyivuselele.
Lo mdlali obesekhuza ibuya okwesibili kwiChiefs uzobe enganalo iqembu abhalise kulona kusukela ngenyanga ezayo kanti ukhululekile ukuqala izingxoxo nanoma yiliphi iqembu elimfunayo.
OLUNYE UDABA: UNdulula ushona ezintangeni ngekusasa lakhe
UNkosi ueseke wadlalela amaqembu ahlukene kwiPSL okubalwa kuwo iBloemfontein Celetic, SuperSport United ne-Golden Arrows kanti useke wadlal anaphesheya kwezilwandle.
Ekhuluma neSiya Crew lo mdlali odabuka eNewcastleukuqinisekisile ukuthi useke waba sezingxoxweni namaqembu athile kwi-PSL ngenhloso yokuthola inkotileka yesizini ezayo.
Uthe okwamanje akakabi sesimweni sokudalula amagama ala maqembu kuze kube izingxoxo ziyaphothulwa.
“Yebo kunjalo ngiyakhuluma namaqembu kodwa ngeke ngisho ukuthi imaphi engibonisana nawo ngoba akukho osekuphothuliwe okwamanje.
Kumele ulindele ukuthi ngizobe ngigijima kwiPSL ngesizini ezayo,” kusho lo mdlali.